Tahiry fampiasam-bola amin'ny varotra trano | Tahirim-bola manerantany - REICG
721 mpampiasa vola
Tahiry famatsiam-bola any Etazonia
Ho an'ny mpampiasa vola manerantany
MANAIKY NY MPANARITRA TSY ANTANANTSIKA MAY 1 Mey
Ny filozofia fampiasam-bola REI dia maka tahaka ny modely Warren Buffet,
"Ny fe-potoam-piasana tianay indrindra dia mandrakizay".
Mividy trano fivarotana sy mitazona… mandrakizay izahay! Ny vola miditra amin'ny fanofana rehetra dia haverina hividianana fananana ara-barotra bebe kokoa, hampitombo ny sandan'ny tahiry fampiasam-bola exponentially.
Mividy trano fivarotana sy mitazona… mandrakizay izahay! Ny vola miditra rehetra amin'ny hofan-trano dia haverina hividianana fananana ara-barotra bebe kokoa, hampitombo ny sandan'ny tahirim-bola.
Ahoana no tsy itovizan'ny REICG Fund Real Estate Estate?
Ny ankamaroan'ny vola amin'ny famatsiam-bola dia mizara ny fiverenana amin'ny fomba iray amin'ny roa, na amin'ny alàlan'ny fizarana / dividends na amin'ny alàlan'ny famonoana ny fananana ifotony.
REICG dia mamerina ny vola mivoaka azo avy amin'ny fananan-tany amin'ny fividianana trano bebe kokoa. Ity metodrafitra fampiasam-bola ity dia mampitombo ny fitambaran'ny vola mitentina Fund, mamela ny Fund hividy fananana bebe kokoa, mampitombo ny portfolio. REICG dia vokatra fampiasam-bola maharitra izay mampitombo ny volan'ny mpampiasa vola amin'ny alàlan'ny fankasitrahana ny sandan'ny Tahiry.
Ny ankabeazan'ny fampiasam-bola amin'ny trano sy tany dia voajanahary lava ary voafetra ihany ny fatrany, fa ny REICG kosa dia namorona fiara fitateram-bola ahafahan'ny mpampiasa vola mamoaka ny anjarany amin'ny fetr'andro.
Tsidiho eto ny volanay
Ampiasao amin'ny trano sy tany toa ny fianakaviana manankarena indrindra manerantany.
Ny 1% ambony dia nampitombo ny hareny tamin'ny fananan-tany ara-barotra nandritra ny taranaka maro. Nahazo fidirana manokana hividy naoty fampiasam-bola izy ireo, trano fivarotana, ary mitazona ireo fananana ireo mandritra ny fotoana maharitra.
Navoakan'izy ireo an-tsokosoko ny ankamaroan'ny vola miditra amin'ny trano sy nampitombo ny hareny hatrany.
Nahoana no mampiasa vola amin'ny A REI Capital Growth Tahirim-bola ho an'ny fampiasam-bola ara-barotra ara-barotra?
Ny fametrahana ny volanao hiasa ho anao dia lalana voaporofo amin'ny fahalalahana ara-bola. Ary avy eo ny fametrahana ny volanao hiasa amin'ny indostrian'ny trano dia manana tombony miavaka.
Ny fampiasam-bola amin'ny trano sy tany dia fantatra fa marin-toerana kokoa noho ny karazana fampiasam-bola maro hafa indrindra rehefa mampiasa vola amin'ny famatsiam-bola izay mitantana ny zava-drehetra ny matihanina. Na izany aza, mihevitra ny ankamaroan'ny olona fa tsy afaka miditra amin'ny trano ianao raha tsy amin'ny fananganana na fividianana trano irery.
A tahiry fampiasam-bola dia fomba iray voaporofo hiditra amin'ny tsenan'ny fampiasam-bola.
Alohan'izany anefa dia andao jerena ny fotony.
Inona no atao hoe tahiry famatsiam-bola ary ahoana no fiasa?
Ny tahirim-bola amin'ny famatsiam-bola dia trano fanangonana vola avy amin'ny mpampiasa vola manokana na orinasa mikendry hampiasa vola amin'ny trano sy tany. Amin'ny lafiny ara-dalàna, ny tahirim-bolan'ny trano sy trano dia orinasam-pandraharahana noforonina mba hiara-hientana amin'ireo mpampiasa vola mitovy hevitra aminy. Matetika, Tahiry ara-barotra any Etazonia ny mpampiasa vola dia mahazo tombony amin'ny alàlan'ny fankasitrahana ny renivohitra.
Tombontsoa sasany amin'ny fampiasam-bola amin'ny famatsiam-bola amin'ny trano sy tany
# 1: Diversification portfolio
Na manam-pahaizana ianao na tsia, mety ho fanamby ho an'ny mpampiasa vola antonony ny maminavina ny fanovana tsena na ny fihenan'ny tsena rehefa mitantana ny fananana koa ianao.
Rehefa miova ny tsena dia mety ho lasa mampidi-doza kokoa noho ny hafa ny karazana trano sasany. Ambonin'io fitantanana io, ny fampiasam-bola amin'ny fananana tsy iray ihany fa lasa maro dia mety tsy ho vita afa-tsy ho an'ny matihanina. Eo no misy REI Capital Growth Tonga miaraka amin'ny traikefa an-taonany amin'ny fitantanana sy fampitomboana tahirim-bola ara-barotra momba ny trano.
# 2: Teboka ambany fidirana
Raha tokony hiasa mandra-pitahirizanao vola be hividianana trano ianao dia hanome anao fotoana hanombohana mampiasa vola amin'ny renivohitra ambany ary asa kely kokoa ny volam-barotra amerikana amerikana.
# 3: Paikady fampiasam-bola tsotra
Rehefa mandinika ireo dingana tafiditra amin'ny fitadiavana, fisavana ary fanamarinana ny fananan-tany dia mety ho asa manontolo andro izany. Miaraka amin'ny traikefa an-taonany, REI Capital Growth mahay mametraka araka ny tokony ho izy ny asa ary mijinja ny valim-pitia manome anao fotoana tena tsy misy dikany miaraka amin'ny Tahirim-bola fampiasam-bola ara-barotra ara-barotra. Manao ny asa rehetra hatrany am-piandohana ka hatramin’ny farany izahay. Ny andraikitrao? Mampiasa vola, manambatra ary mampitombo ny harenan'ny taranaka toy ny 1% ambony indrindra.
Ampiasao amin'ny varotra trano toy ny fianakaviana manankarena indrindra manerantany.
Ny 1% ambony dia nampitombo ny hareny tamin'ny fananan-tany ara-barotra nandritra ny taranaka maro. Nanana ny fahazoan-dàlana manokana hividy naoty fampiasam-bola, trano sy varotra ary mitazona ireo fananana ireo mandritra ny fotoana maharitra izy ireo.
Ianaro ny fomba fiasa
970 fahavaratra St.
Mon-Zoma: 9:00 maraina - 5:00 hariva EDT
Na iza na iza dia afaka ho lasa mpampiasa trano iraisam-pirenena, tsy misy fampiasam-bola lehibe na traikefa teo aloha. Mampiasà karazana tahirim-bola REI vaovao anio!
Tahiry famatsiam-bola amin'ny trano sy tany
Ny takelaka fisoratana anarana
Fanolorana mari-pamantarana fatorana
© 2022 REI Capital Growth, LLC | Zo rehetra voatokana.
"The Reinvented Funds®"Ary"Real Estate Investing Reinvented®" dia marika voasoratra anarana an'ny REI Capital Management LLC.
REI Capital Management (REICM) dia miasa amin'ny tranokala reicapitalgrowth.com (ny "Site") .Raha mampiasa ny tranokala ianao dia manaiky ny fepetra momba ny serivisy sy ny politikam-pirahalahiana. TSY MISY VOLA NA FANAMARIHANA INDRINDRA NO VOAFIDINA, ARY VOLA AZO ATAO RESPONSE, TSY HANAIKY IZAO. FAMPANDROSOANA NY INDRINDRA MISY TSY MISY ADIDITRA NA FANOLORAN-KEVITRA NA INDRINDRA NA IZA AZY. TSY MISY TOLOTRA Hividianana SECURITIES AZA HATRANY ARY TSY MISY MAHARITRA NY VAROTRA Fividianana AZA AZO ATAO AZA NY FANAMBARANA natolotry ny kaompania niaraka tamin'ny SEC NAHASOA NY SEC.RAY IZAY FANAMBARANA TOA IZAY MBA TSY HETRAKA NA HORATRA, TSY MISY ADIDINA NA FANOLORAN-KEVITRA NA INDRINDRA AZA, AMIN'NY FOTOANA REHETRA ALOHA NY FAMPANDROSOANA NY FANORENANA AZY AOKA NY Datin'ny fanamarinana.
Ny fiarovana rehetra dia misy risika ary mety hiteraka fatiantoka ampahany na total. Izahay, raha miresaka momba ny REICG sy ny REICG rehetra dia tsy manome toro-hevitra momba ny hetra na fampanjariam-bola. Tsy misy azo antoka ny valiny voalaza eto na aiza na aiza amin'ity tranokala ity ary azo antoka fa hiteraka vokam-bola na hetra manokana. Ireo mpampiasa vola ho avy dia tokony hiresaka amin'ireo mpanolotsaina momba ny hetra manokana momba ny voka-dratsy ateraky ny toe-javatra misy azy ireo. Na REICM na ny mpiara-miasa aminy dia samy tsy tompon'andraikitra amin'ny vokatry ny hetra na ny vokadratsin'ny fampiasam-bola amin'ny drafitry ny mpampiasa vola rehetra manangona vola amin'ny tolotra REICM. Ny hafatra ato amin'ity tranonkala ity dia tsy soso-kevitra hivarotra na fangatahana fahalianana amin'ny filaminana rehetra. Izahay dia tsy mangataka afa-tsy amin'ny alàlan'ny antontan-taratasinay fanolorana ofisialy toy ny memoara fametrahana manokana na prospectus. Ireo antontan-taratasy fanolorana ireo dia tsy azo atao raha tsy amin'ny alàlan'ny vavahadin-tseraseran'ny "INVEST NOW".
Azafady zarao ny toerana misy anao raha hanohy.
Jereo ny momba anay mpitari-dalana fanampiana fa more Info.
Hanova ny firafitry ny cookie